Jurgen Klopp oo ka hadlay sida uu kaga xun yahay goolkii laga diiday Sadio Mané kulankii xalay ee Arsenal – Gool FM
Jurgen Klopp oo ka hadlay sida uu kaga xun yahay goolkii laga diiday Sadio Mané kulankii xalay ee Arsenal
(Liverpool) 04 Nof 2018.Tababaraha kooxda Liverpool Jürgen Klopp ayaa ka qoomameenaya in la kansalo goolkii uu dhaliyay Sadio Mané kulankii xalay ee Arsenal.
Dhinaca kale Jürgen Klopp ayaa isla waqtigaas tilmaamay in kulanka uu kusoo idlaado natiijo barbaro 1-1 ah ay tahay wax wanaagsan, inkastoo ay kooxdiisa awood u lahayd inay guul gaarto.
Kulankii xalay la wada sugayay ee ka tirsanaa kulamada 11-aad ee horyaalka Premier League ay wada ciyaareen kooxaha Arsenal iyo Liverpool ayaa kusoo idlaaday barbaro 1-1
Kulan ayaa dhaliyay muran xoogan ee dhanka garsoorka, kadib markii uu kansalay goolkii uu ka dhaliyay Sadio Mané kooxda Arsenal, kaasoo uu ku tilmaamay inuu ahaa garab dhaaf.
Jürgen Klopp ayaa kulanka kadib kasoo hor muuqday saxaafada wuxuuna ka hadlay dhowr arimood ee ku saabsan xaalada kooxdiisa.
“Waxaan dhalinay gool cajiib ah, Virgil van Dijk wuxuu helay laba fursad uu goolal ku dhain gaaray, kuma faraxsani qaab aan u difaac tanay qeybtii hore ee ciyaarta, sababtoo ah taasi ma ahan waxa aan doonayay, balse waxaan ku fiicneen weerarada gaadmada ah”.
“Waxaan arkay van Dijk ciyaarta kadib isagoo dhahaya waxay ahayd in aan kulankan dhaliyo saddexley, ma ihi ciyaaryahan kubada cagta ee aad u wanaagsan, balse waxaan ku fiicanahay kubadaha dhanka madaxa, waxayna ahayd inaan goolal u badalo saddexdii fursad ee aan helay”.
“Barbaraha waa natiijo fiican, waxaan u maleenayaa in Unai Emery uu isla hadalkaas dhihi doono, waxaan helnay fursado cadaan ah sidoo kale iyagana waxay heleen fursado, balse barbaraha garoonka Arsenal waa natiijo fiican inkastoo aan dooneenay inaan ka guuleysano”.
Intaas kadib Sadio Mané ayaa wuxuu hadalkiisa kusoo xiray ka hadalka goolkii laga diiday Sadio Mané inta uu socday kulankii Arsenal.
“Waxaan u maleenayaa inuu ahaa gool cadaan ah, balse tani waa kubada cagta, wuxuu ahaa weerar fantaastik ah, balse nasiib daro goolka nalooma xisaabinin”.
HORDHAC: Udinese v AC Milan
“Cristiano Ronaldo waa ciyaaryahan cajiib ah, xitaa hadii uusan dhalinin wax gool ah” _ Massimiliano Allegri